Page 263 – MySansar
मूलधारे मिडिया र सोसल मिडियामा निकै प्रचारबाजी गरेर सुरु भएको फिल्म हाइवे अब हलमा लागेको छ। प्रचारका लागि यसले सबै संभव उपाय अपनाएको थियो। सबै निर्माता/निर्देशकले आफ्नो फिल्म चलोस् भन्ने सोच्छन्, त्यसैले यस्तो गर्नु अचम्म हैन। यसले फरक तरिकाले गर्‍यो, त्यसैले यो फिल्ममा सबैको चासो भयो। प्रचारबाजीमा यो फिल्म उत्कृष्ट भएकोमा शंका छैन। तर प्रचारले… Continue reading
Posted on July 21, 2012 July 21, 2012 by mysansar
-माधव नेपाल (पूर्व प्रम हैन)- एउटा प्रशिक्षणको क्रममा मधुर र गोपीको भेट भएको हो। मधुर प्रशिक्षक थियो। गोपी प्रशिक्षार्थी थिई। तीसौ जना प्रशिक्षार्थी मध्ये गोपी मधुरसँग नजिक हुन खुब कोशिस गर्थी। तथापि मधुरले खासै चासो दिएको थिएन। तीन दिने प्रशिक्षण सकियो। विदा हुने बेला मधुरले आफ्नो ब्यक्तिगत नम्बर सबैलाई टिपाइदियो। त्यसपछि गोपीको दिनचर्या मधुरलाई फोन… Continue reading
विचार नमिलेका वैद्य समूह अलग्गिएपछि अब चाहिँ माओवादीभित्र केही विवाद हुँदैन होला भनी सोच्नेहरुलाई आजको घटनाले गतिलै झापड हानेको छ। आज हात हालाहाल र कुर्सी हानाहानसम्मको स्थिति उब्जियो- प्रधानमन्त्री बाबुराम र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहबीच। होहल्ला र कुर्सी प्रहारका बीच भागदौड मच्चिएको थियो बैठकमा। हिजोसम्म लडाकुले हिसाब मागेपछि स्थगित गर्नुपरेको बैठक आज चाहिँ यही महाभारतका… Continue reading
अनुहार त भ्रममात्र !
Posted on July 19, 2012 by mysansar
-गणेश भट्टराई- बन्द हुनु नौलो रहेन । बिजुली जाने दिन अंध्यारोमा बस्ने आदत भैसक्यो । ग्यास-तेल लिने लाइनमा नबसे खाएको नपच्ला । चामलको भाउ घट्दैन, कर्मचारीको तलब बढ्दैन । मल सुलभ नभएको चिन्ताले किसानलाई पिरोल्छ, कारखानाका पाट-पुर्जामा भन्सार छुट नपाए भारतीय सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने पिरले उद्ध्योगपती-व्यापारी दुखी छन् । कर्मचारी, किसान, व्यापारीमात्र होईन सबै… Continue reading
भिसा बिना उडेका कारण अबु धाबीमा मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर अलपत्र परेको समाचारबाट पनि नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलका अध्यागमनका कर्मचारीहरु चेतेका रहेनछन् कि के हो, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत रातो मुख लगाउन बाध्य पारिदिएछन्। इमिग्रेसनले कतारमा बस्ने भिसा छ, छैन चेक नगरी उडाइदिएकोले परिवारसहित ज्ञानेन्द्र रातभर दोहा विमानस्थलमै अलपत्र परे। फ्रान्सबाट ददि सापकोटाले चलाएको ब्लग नेपालप्लसले यसको… Continue reading
-सी.बी.रायमाझी- विगत लामो समयदेखि माइसंसारमा म पाठकको रुपमा सहभागी हुँदै आएको छु। तर पनि हालका दिनमा कता-कता आफ्ना अनुभव पनि ती जागरुक तथा उत्साही पाठक र आलोचक, समाचोचक मित्रहरु माझ साझेदारी गरौँ कि भन्ने भएको छ। म नेपाल सरकारको निजामती सेवामा झण्डै ३२ वर्षको सेवा बिताई करिब ३ वर्ष पहिले ५१ वर्षको उमेरमै स्वेच्छिक अवकाश… Continue reading
शब्द अर्थ- साधुः पोइल गएकी स्वास्नीको विवाहित पति, पूर्वपति। जारः अर्काकी स्वास्नीलाई राजीखुशीसाथ लैजाने व्यक्तिलाई पहिलेको लोग्नेले भन्ने शब्द, अर्काकी स्वास्नी फकाएर लैजाने व्यक्ति। स्रोतः प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोश शंकर अधिकारी प्रकाश दाहालसित मेरो दोहोरो चिनजान थिएन । चिनजान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि ठानिनँ । एउटै पार्टीमा हुँदा पनि न कहिल्यै हात मिलाइयो न जम्काभेट भयो ।… Continue reading
नेपालकै सबैभन्दा बढी तलब लिनेको राजीनामा
Posted on July 16, 2012 by Salokya
कतिपय संस्थामा पारिश्रमिक खर्चको ८५ प्रतिशत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एक्लैले लिने र बाँकी १५ प्रतिशत मात्र अरु कर्मचारीले लिने गरेको पाइयो। पारिवारिक कम्पनीहरुमा आफै सीइओ बस्ने, मासिक तलक बीसौँ लाख रुपैयाँ लिने, श्रीमति, छोराछोरीलाई पनि माथिल्लो तहको कर्मचारी राखेर तलब धेरै दिने गरिरहेका छन्। यसरी भएभरको कमाई आफैले मात्र खाने चलन देखियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र… Continue reading
राष्ट्रप्रमुख हुँदा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको बोइङ ७५७ नै निजी विमानसरह बनाई २० दिनका लागि अफ्रिकी राष्ट्र ट्युनिसिया पुगेका ज्ञानेन्द्र शाह आज भने कतार एअरवेजको QR357 जेट चढ्दै गरेका देखिए। परिवारसहित दुई साता लामो फ्रान्स भ्रमणका क्रममा ज्ञानेन्द्र दोहातिर उडेका हुन्। राष्ट्रप्रमुख नभइसकेपछि यो उनको पहिलो भारतबाहेकको विदेश भ्रमण हो। उनीसँगै उनकी पत्‍नी कोमल, बुहारी… Continue reading
अन्ततः नेताहरुले यस पटक पनि उही काम गरी छाडे- बजेटको बिजोग! ६२/६३ को जनआन्दोलनपछि एक वर्षको बजेटमात्र पूर्ण आएको छ, बाँकी सब समय बजेटलाई बार्गेनिङको विषय बनाई दलहरुले बन्धक बनाएका छन्। उही पार्टी सरकारमा रहँदा पूर्ण बजेटको वकालत गर्छ, उही विपक्षमा रहँदा चाहिँ पूर्ण ल्याउनै हुन्न भनी जिद्दी गर्छ। बजेट समयमा र पूरा आएन भने… Continue reading